Izindlu e- Järvenranta Lake Oulujärvi - I-Airbnb
Izindlu e- Järvenranta Lake Oulujärvi
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Antti
I-Järvenranta iyi-villa yesimanje osebeni lwe-Oulujärvi ehlanzekile necacile. Amafasitela ayo amakhulu anikeza imibono emihle kakhulu yolwandle nechibi. I-sandy beach engajulile ifaneleka ngokukhethekile izingane.
Ugu lwechibi luyi-villa yesimanje osebeni lwechibi elihlanzekile nelicacile e-Oulujärvi. Amafasitela ayo amakhulu anokubukwa okuhle kakhulu kolwandle kanye nechibi. I-sand beach ephansi ifaneleka ikakhulukazi izingane.
Indlu enkulu (120 m2) inamakamelo amabili okulala, i-loft enkulu, igumbi lezinsiza, indlu yangasese, ishawa kanye negumbi lokuphumula / ikhishi elivulekile. Isakhiwo esikhulu sinemibhede yabantu abayi-10. Isakhiwo se-sauna (32 m2) sinegumbi lokugqoka, ishawa, i-sauna kanye negumbi lezivakashi elinomnyango ohlukile nombhede okabili.
I-villa izoba namanzi ompompi, i-villa inokushisa kwe-geothermal kanye nesistimu yokupholisa. Indawo yokugeza itholakala ngokuhlelwa kwangaphambili (inkokhelo eyengeziwe 80 € / isikhathi). Ilineni lombhede namathawula imali eyengeziwe 10 € / umuntu. Ukuhlanza akufakiwe entengo, kodwa kungathengwa ngokwehlukana nge-€ 150.
Indlu enkulu (120 m2) inamakamelo amabili okulala, i-loft enkulu, igumbi lezinsiza, indlu yangasese, ishawa kanye negumbi lokuphumula / ikhishi elivulekile. Isakhiwo esikhulu sinemibhede yabantu abayi-10. Ibhilidi le-sauna (32 m2) linegumbi lokugqoka, ishawa, i-sauna kanye negumbi lezivakashi elinomnyango ohlukile onombhede okabili odonsayo.
I-villa izoba namanzi ompompi, i-villa inokushisa kwe-geothermal kanye nesistimu yokupholisa. Indawo yokugeza itholakala ngokuhlelwa kwangaphambili (inkokhelo eyengeziwe 80 € / isikhathi). Ilineni lombhede namathawula imali eyengeziwe 10 € / umuntu. Ukuhlanza akufakiwe entengweni, kodwa ukuhlanza kungathengwa ngokwehlukana nge-€ 150.
4.91 out of 5 stars from 12 reviews
4.91 · 12 okushiwo abanye